Muwaadiniin u dhashay dalka Sweden oo lala xiriirinayo Alshabaab oo loo gacan geliyay dowlada Maraykanka – idalenews.com
Muwaadiniin u dhashay dalka Sweden oo lala xiriirinayo Alshabaab oo loo gacan geliyay dowlada Maraykanka
Muwaadiniin u dhashay dalka Sweden ayaa la sheegay in loo gaccan geliyay dowlada Maraykanka iyagoo lagu eedeynayo inay tababar la soo qaateen ururka Alshabaab.
Raggan ayaa la sheegay in ay ahaayeen labo dhalinyaro ah oo asalkoodii hore ka soo jeeday dalka Soomaaliya ayaa dowlada Sweden waxa ay sheegay inaysan ka warqabin in loo wareejiyay dalka Maraykanka,
Wasiirka arrimaha dibada ee Sweden Carl Bildt oo ay wareysatay idaacada Sveriges ayaa su’aal ka keenay haddii loo gacan geliyey dadkaas Maraykanka goorta ay dhacday.
Waxana uu wasiirku sheegay in dowlada Sweden aysan ka warheyn in labadaas nin loo gacan geliyay dowlada Maraykanka.
labada ruux ee Swedishka ah oo da’adooda lagu sheegay 27 iyo 29 jir oo asalkoodii hore ahaa Soomaali ayaa lagu xirey dalka Djibouti bishii August ee 2012 sida ay qortay the local oo ah wargeys ka soo baxa dalka Sweden.
Wasaaradda arrimaha dibada ee Sweden ayaa la bilowday wadahadalo dowlada Djibouti ragaas in dib loogu soo celiyo dalka Sweden. Hase ahaatee kahor inta aysan wadahadaladii aan soo dhamaan ayaa labada nin la sheegay in loo duuliyay dalka Maraykanka si halkaas loo saaro maxkamad iyagoo lagu eedeynayo in ay ka qeybgaleen tababar hubka iyo waxyaalaha qarxa oo uu ururka Alshabaab siiyay.
Muwaadiniintan reer Sweden ayaa ku biiray Alshabaab 2008dii waxaana lagu eedeeynayaa in ay Alshabaab la shaqeynayeen tababarna la qaadanayeen muddo afar sano ah.
Nin ay walaalo yihiin mid ka mid ah labadan ruux ee la sheegay in loo wareejiyay dalka Maraykanka ayaa hore u sheegay in ay aad uga xumaayeen in ay ku biireen Alshabaab markii la qabanayayna waxa ay ka baxsanayeen ururkaas.
Hay’adda u qaabilsan dalka Sweden amniga ayaa weydiisay dadka dambiyada ku soo oogay labadan nin in dacwadooda lagu qaadi karo wadanka Sweden. Hase yeeshee waxaa la xaqiijiyay inuusan jirin sharci fasaxaya in dacwad loogaga furo wadanka Sweden.
Qareenka u doodaya mid kamid ah labadan muwaadin oo aan magacyadooda la shaacin ayaa hore u sheegay inaysan jirin wax dambi ah oo ay ka galeen dalka Maraykanka. Haddii dambiyo loogu helo raggan dalka Maraykanka waxa ay mudan karaan xabsi gaaraya illa soddon sano.
Dhacdooyin La Yaab leh oo laga soo Ururiyey Howlagalada Ciidamada Dowladda ee Muqdisho (Warbixin)
Walaaca Somaliland ka qabto aqoonsiga Mareykanka ee Soomaaliya oo soo xoogeysanaya